Nei Uri Kunzwa Kukundwa Uye Zvekuita Nezvo - Pfungwa
Nei Uri Kunzwa Kukundwa Uye Zvekuita Nezvo
Pfungwa dzako igungwa risingapindirwe remafungiro uye manzwiro, richirova kunge masaisai ari kurovera mukati medehenya rako. Unoedza kuramba uchiyangarara, asi haugone kubatsira kunzwa sekunge ingori nyaya yenguva musoro wako usati wanyangarika pazasi pemvura.
Uyu ndiwe paunenge uchinzwa kuremerwa nehupenyu. Aya ndiwo maitiro anoita pfungwa dzako kana zvese zvikasvika pamusoro pako kana iwe uchinzwa usingakwanise kurarama nazvo zvese.
Chikonzero cheizvi inogona kurira kunge iri pachena kwazvo: imhinduro kumatambudziko. Uye, hongu, iwe unenge wakarurama mukufunga kuti uku kungonzwisisa kwepamusoro kwemamiriro acho ezvinhu. Asi, pakukosha kwazvo, pfungwa yekuremerwa yaunowana kuita kwemuviri wako nepfungwa kunetseka.
Zvikurukuru, ndiyo mhinduro kudzvinyiriro inokonzerwa nekuvakwa kwemitoro mizhinji - zvese zvikuru nezvidiki - uye nekutenda kuti haukwanise kuchengeta mahwendefa ese achitenderera kwenguva yakareba. Iko kutya kusaziva kwekurega ndiro ichidonha uye kupwanya kunokonzera kushushikana kupindura kunoguma nekuziva chaiko kwekunzwa kwekuremerwa.
Mhando yemhinduro iyi yakanangana nekuti ine chekuita nekusanganiswa kwezvakawanda zvinonetsa - haisi iyo mhando yemhinduro iwe yaunowanzo sangana nayo apo kushungurudzika chinhu chimwechete sekusazadzikiswa pabasa rako kana kufirwa munguva pfupi yapfuura.
Kana kukurirwa kukaitika, huropi hwako hunotambura kugadzirisa zvese zvakasiyana nyaya nekuti iwe unogona chete kupa pamusoro pekuziva kufunga kune imwe panguva. Asi kana iwe ukaedza kudaro, kushushikana kunokonzerwa nemamwe ese ako mamwe matambudziko kunokutadzisa kubva kufunga zvakajeka pane wawakasarudzira.
zvinoratidza kuti haasisiri mauri futi
Funga nezvepfungwa dzako semusuwo uko matambudziko anowirirana nemhinduro pavanopfuura napo. Kana iwe uchinzwa kuremerwa, kune matambudziko akawanda kwazvo kuyedza kusundira nzira yavo nepasuo zvekuti, pakupedzisira, hapana imwe yadzo inogona kutsimbirira kupfuura vamwe.
Mhinduro yacho yakatwasuka: iwe unofanirwa kujekesa mugwagwa kuitira kuti nyaya dzaunotarisana nadzo dzipfuure zvakare nemusuwo panowanikwa mhinduro.
Pane nzira mbiri dzaungaite izvi:
Donhedza dzimwe nyaya zvachose kuitira kuti mugwagwa uve pachena kune vamwe.
Gadzira traffic management system kuitira kuti dambudziko rega rega rigone kugadziriswa imwe panguva pamwe nekujeka uye kupfupisa kufunga.
Mukuita, iwe ungazopedzisira wabatanidza nzira mbiri kuti ugadzire zano rimwe chete.
Zvinonzwika zviri nyore, asi iwe unozvitora sei izvi nekuzviita mune chairo pasirese?
maitiro ekuudza mukomana waunovada pamusoro pemeseji
Zvakanaka, kutanga iwe unofanirwa kuziva zvese izvo zvinhu zvakakonzera kuti iwe unzwe kuremerwa. Pasina zano rakajeka rezvinhu zvakawanda zvinoda kugadziriswa, haungakwanise kugadzirisa dambudziko rese.
Tora chinyoreso nebepa uye nyora pasi zvese zvinonetsa zviri kutamba mupfungwa dzako pasekondi ino. Usatombo kunetseka pamusoro pekuti vamwe vanokoshesa sei zvisingaite kuti vazviise pachena.
Tevere, sarudza kuti ndezvipi, kana zviripo, zviri kunetsekana zvaunogona kubhinha zvizere. Tarisa pane yako runyorwa uye nyatso zvibvunze pachako kana chimwe nechimwe chinhu chiri chinhu chakakodzera kutarisisa kwako, kana kana uri kunetseka nezve chimwe chinhu chisina hwaro hwekongiri muchokwadi.
Zvichida wakazviwana mumusoro mako kuti uri panjodzi yekudzingwa newaunoshandira. Nyatsoongorora zvakadzama uye wobvunza kana njodzi iyi iri yechokwadi uye yakakomba, kana kuti kana uchingonetsekana pasina chinhu. Iva akatendeseka newe pachako uye iwe uchawana mhinduro dzakakodzera kumibvunzo iyi.
kuva nechokwadi sei musikana anokuda
Ndinovimba iwe ikozvino uchave nerudiki runyorwa rwezvinonetsa zvekushanda nazvo mushure mekuona izvo zvaunogona kufadza kufuratira pasina chero mhedzisiro. Basa rako rinotevera ndere kutsvaga nzira yekuisa iyo nyaya inosara mune imwe mhando yehurongwa.
Chete kana wakaisa pamberi iwe unozogona here kugadzirisa yega yega nyaya zvinobudirira kana musuwo wako wakavhurika uye mugwagwa unopfuura une imwechete nzira yemugwagwa.
Kukoshesa kunouya kune zvinhu zvikuru zviviri: rakakura sei nyaya iripedyo uye inoda kukurumidza kugadziriswa sei?
Muenzaniso 1: saimba wako akakupa ziviso yemwedzi miviri yekubuda mumba mako. Mubvunzo wenguva ungaratidzika kunge wakanangana - iwe une mwedzi miviri yekutsvaga kumwe kwekugara - asi iwe unofanirwa kudzoka kudzoka kubva kune iro rakatemwa zuva uye funga nezve nhanho kubva ipapo kusvika zvino. Zvinotora nguva yakareba sei kuronga kuona kune imwe nzvimbo yekugara, zvinotora nguva yakareba sei kusaina zvibvumirano, zvinotora nguva yakareba sei kuronga kambani yekubvisa, uye zvinotora nguva yakareba sei kurongedza?
Kana iwe uchikwanisa kuputsa dambudziko rega rega pasi seizvi, saka unogona kugadzirisa nhanho imwe panguva yakakodzera kwazvo.
unoita sei kuti nguva ikurumidze
Nezvekukosha kwenyaya iyi, kusava nemusha zvirokwazvo hachisi chinhu chaungade kufunga nezvacho, saka unenge wakarurama kutara ichi sechinetso chikuru chinoda kuti utarise.
Muenzaniso 2: zuva rako rekuzvarwa riri kuuya munguva yevhiki uye iwe ungade kuronga mhemberero neshamwari dzako.
Nguva yakatarwa yakatarwa zvakare, asi panguva ino unogona kunge usiri kunetseka zvakanyanya kana pasina chakanyatsorongeka nekuti iwe unogona kungoenderera uchishuva uye uwane yekudyira, bhawa, kana chiitiko pazuva. Pari zvino, pamwe chete chinhu chiri kunyatsomanikidza ndechekuti vanhu vazive kuti vanofanirwa kuchengeta zuva racho mahara.
Muenzaniso 3: hauna mufaro pabasa rako razvino uye ungade kutevedzera imwe nzira yebasa nekutora chinzvimbo chitsva.
Pano nguva yenguva yekunetsekana kwako yakashomeka. Iwe une basa uye inotevera mari uye, kana zvichidikanwa, iwe unogona kuenderera mune imwechete tsinga kwechinguva.
Kune rimwe divi, iwe unogona kunge wakaora mwoyo nemamiriro ako ezvinhu zvekuti unopa zvibodzwa zvakaringana mariri maererano nekukosha kwaro.
Saka, nechinhu chimwe nechimwe chiri pane yako runyorwa, iwe unofanirwa kuyera kuomarara kwemamiriro acho uye chero zvipingamupinyi zvenguva zvinogona kuiswa mukutsvaga mhinduro. Izvo hazvingagare zviri nhema kana chena, asi neimwe nzira iwe unofanirwa kuodha rondedzero kubva kune vakawanda vachimanikidza kusvika padiki.
Zvino, uine chiono chakajeka chezvinofanira kutanga zvaitwa, unogona kutanga kugadzirisa nyaya dzako pasina pfungwa yedambudziko rava pedyo rawaive naro usati wapedza chiitiko ichi.
Pfungwa dzako dzinogona kunge dzisina kunyarara, asi iwe unozogona kuzvipira zvakakwana zvehutano hwako kugadzirisa chimwe nechimwe chinonetsa panguva.
Edza iyi nzira nguva inotevera iwe paunenge uchinzwa kuremerwa nematambudziko ehupenyu. Tiudze kana zvichishanda nekusiya chirevo pazasi.
vakaroorana vanogadzira mushure mekurwa
chii chaungaite kuti uchinje nyika
kuita sei kuti murume wako akuremekedze
matauriro aungaita mumwe munhu iwe uine manzwiro kwavari
sei ndiri kunetseka zvakanyanya nguva pfupi yadarika
chii chandinofanirwa kunge ndichiita nehupenyu hwangu